Ciidamada Somalia oo Weeraray Saldhig Al-Shabaab
Wararka ka imanaya Gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in Ciidamada kumaandooska Soomaaliya ee sida gaarka ah u tababaran, ay xalay weerar ku qaadeen saldhig ay kooxda al-Shabaab ku lahaayeen deegaanka Tooratoorow, oo u dhow degmada Awdheegle.
Ciidamadan, oo meel duleedka deegaankaasi ka ah uga soo degay dayaarado helikabtarro ah, ayaa waxa la socdey saraakiil ajaaniib ah sida ay sheegayana warar aanu ka helnay dadka deegaanka, waxaana la sheegay in ay ka tirsanaayeen guuto fadhigoodu yahay saldhiggii hore ee ciidamada cirka ee Balidoogle.
Ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay iska horimaad dhex maray Shabaab iyo ciidamadaasi. Balse, saraakiil ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha Hoose, ayaa VOA u sheegay in khasaare dhimasho iyo dhawac Shabaab uu ka soo gaaray weerarka.
Kooxda Shabaab, ayaa iyana la sheegay in ay hareeraha deegaankaasi ku aaseen miinooyin, iyagoo hadba jihada xabbadda uga soo dhacda ku qarxinayay miinooyinkii ay ku aaseen.
Tooratoorow, waxay xarrun weyn u tahay kooxda al-Shabaab. Kooxda Al-Shabab ayaa iyaguna ka hadlay weerarkaasi waxayna sheegeen inay iska caabiyeen weerar ay kusoo qaadeen ciidamo ajnabi ah.